Torohevitra 5 hanovana tsara ny vinan'ny Internet ho lasa mpanjifa | Martech Zone
Alakamisy, Septambra 25, 2014 Alakamisy, Septambra 25, 2014 Douglas Karr
Nizara momba ny fomba mampino izahay Refresh fampiharana dia omaly. Nahalala momba azy ireo aho rehefa nahazo an'ity infographic ity mba zaraiko amin'izy ireo, Ahoana no hanakatonana ny fitarihana varotra. Ny dia faritan'izy ireo amin'ny mailaka dia manomboka rehefa ny ny firaka dia azo avy amin'ny marketing.
Ireo toro-hevitra 5 hanidiana ny firaka
Mampiasà CRM - Mazava ho azy fa mila manana toeran-kafa ianao raketo an-tsoratra, mitadiava fampahalalana fanampiny momba azy ireo, ataovy laharam-pahamehana izy ireo ary miasa hatramin'ny farany. Customer Relationship Management ny rafitra dia natao ho an'ny fahazoana, fihazonana ary hetsika fanavaozana amin'ny alàlan'ny fanangonana angona ao amin'ny tahiry afovoany momba ny mpanjifa. Raha tsara vintana ny ekipan'ny varotrao dia mampiasa a rafitra fitantanana ny fizotry ny varotra mifanaraka amin'izany. Salesvue dia mpanjifa.
Miezaha hanana fahalalana sy fahalalana - Zava-dehibe ny fotoana ifandraisana ary ny ankamaroan'ny fitarihana dia efa tonga taminao aorian'ny fikarohana ny vokatrao sy serivisinao an-tserasera. Midika izany fa ny ekipanao varotra dia tokony ho vonona hamaly haingana sy haingana ireo fanontaniana apetraka amin'ny prospect - raha tsy izany dia mety ho very ny varotrao ianao.
Mitadiava tany iraisana - Fikarohana ny vinavinanao hanampy anao hiavaka amin'ny fizotran'ny varotra. The Mamelombelona ny fampiharana namboarina manokana ho an'ity! Ary koa, raha manana vahaolana amin'ny automatisation be dia be ianao izay manome isa sy manangona vaovao momba ny fitondran-tenanao - azonao atao tsara ny manome ny sain'ny mpivarotra azy ireo hakingan-tsaina sy hanakatona ny fitarihana mora kokoa.
Mifanatreha mifanatrika - Na dia mitaky an'izany matetika aza ireo firotsahana an-tsehatra, dia tsy dia lafo aho. Nanidy orinasa be dia be izahay manerana ny tranokala ary tsy nilaina ny fihaonana mivantana webinar sy tranokala. ReadyTalk dia mpanjifa. Azo inoana fa mora kokoa ny manakatona mivantana mba hahafahanao manorina fahatokisana mora kokoa, nefa mbola tsy ilaina amin'ny vanim-potoanan'ny Internet.
Mifampiraharaha ary manaraha - Mety misy dingana tsy hita eo alohan'ity, ary izany dia fantaro ny marika fanaintainan'ny mpanjifa ary fantaro ny teti-bola hahafahanao mamorona manokana ny tolo-kevitra iray. Tsy mifampiraharaha loatra izahay… mamantatra izay ilain'ny mpanjifanay izahay ary mamaritra raha hahavita izany sa tsia amin'ny alàlan'ny teti-bolan'izy ireo. Avy eo dia napetrakay ny fanantenana amin'ny fahombiazantsika.
Mampalahelo fa ny infographic dia manondro izany saika ny antsasaky ny mpivarotra dia tsy manaraka mihitsy miaraka amin'ny firaka. Pilina sarotra atelina ho an'ny ekipa marketing izy io satria miasa mafy izy ireo mitondra fiara!
Tags: manakatona firakamanakatona varotravarotra akaikyCRMfifandraisana amin'ny mpanjifaahoana nony fomba fanidiana ny fironana varotraLeadtaratrafmfanantenana